नर्बेमा मध्यरातमा घाम ? :: Press Chautari ::
नर्बेमा मध्यरातमा घाम ?
मध्यरातमा घाम झुल्किने देश भनेर चिनिने नर्बेमा साँच्चै मध्यरातैमा घाम झुल्किने हो त ?
रातको १२ बजिसक्यो, कुनै बत्ति पनि बालिएको छैन तर एउटा मान्छे पार्कको घाँसे चौरमा बसेर मस्तिले उपन्यास पढिरहेको छ । तपाई के सोच्नु हुन्छ ? पक्कै मान्छे असाधारण होला, अँध्यारोमा पनि देख्न सक्ने । तर हैन, म नर्बेको कुरा गर्दैछु ।
नेपालका सामान्यज्ञानका किताबहरुमा लेखिएको हुन्छ, मध्यरातमा घाम झुल्किने देश नर्बे हो । बच्चैदेखि यो पढ्दा अचम्म लाग्थ्यो । रातमा घाम कसरी उदाउँदो हो ? मान्छेहरु के गर्दा हुन् ? सँधैको उज्यालोमा कसरी निदाउँन सक्दा हुन् ? आदि आदि । सायद धेरैलाई यस्तै लाग्छ । कति साथीहरुले सोध्नुहुन्छ, बेलुका एकछिन रात परेपछि फेरि १२ बजे राती घाम उदाउँछ अनि फेरि एकछिनमा अस्ताउँछ, हो ? जवाफ – हैन । अनि किन भनिन्छ नर्बेलाई मध्यरातमा घाम झुल्किने देश भनेर ?अहिलेको गुगलको जमानामा एक पटक गुगल गर्ने हो भने सबै भेटिन्छ । तर हामी प्राय रहस्यमै रमाइरहेका हुन्छौै । वास्तवमा नर्बेलाई मध्यरातमा घाम झुल्किने देश भनिने पनि होइन । कुन चै ‘धेर जान्ने’ले नेपालीमा मध्यरातमा घाम झुल्किने देश भनेर हल्ला पिटिदिएछ, नत्र अंग्रेजीमा यसलाई country with midnight sun अर्थात मध्यरातमा घाम लाग्ने देश चै भनिन्छ ।
उज्यालो र अँध्यारोको कुरा
नर्बे उत्तरी ध्रुवको नजिक पर्ने एउटा युरोपियन देश हो । जुन उतर-दक्षिण फैलिएको छ । यसैले यसको दिन रातको समय पनि दक्षिणी भाग र उत्तरी भागको फरक फरक हुन्छ । म नर्बेको दक्षिण तर्फको भागमा बस्छु, लगभग नर्बेको राजधानी ओस्लोको ३५ किमी दक्षिण । म बसेको स्थानमा सबैभन्दा लामो दिन १८ घण्टा ५० मिनेटको हुन्छ जुन २१ मा, भने डिसेम्बर २१ मा दिन ५ घण्टा ५३ मिनेटको हुन्छ । लामो समय उज्यालो हुने जुन मध्यदेखि जुलाई मध्यको समयमा घाम नदेखिए पनि आकाश उज्यालो रहिरहन्छ । त्यसको उज्यालोले परबाट आएका मान्छेहरु सजिलै चिन्न सकिन्छ । सो अबधिमा यहाँ २४ घण्टा उज्यालो देख्न पाइन्छ । क्रमश: नर्बेको उत्तरतिर बढ्दैजाँदा दिनको समय लामो हुँदै जान्छ । उत्तरी ध्रुबको छेउको नर्बेको भुभागमा अप्रिल १९ देखि अगस्ट २३ सम्म चौबिसै घण्टा घाम लागिरहन्छ । इन्टरनेटमा त्यहाँको सुर्योदय र सुर्यास्त हेर्न खोज्नु भयो भने दिनको समय २४ घण्टामात्र लेखेर सुर्योदय र सुर्यास्त नै लेखिन्न । अस्ताको भए पो उदाउँनु त ।
जुनको पहिलो साता रातको २ बजे खिचेको थिएँ यो तस्विर
जति बेलै उज्यालोको अनुभव
उज्यालो समर खुब रमाइलो हुन्छ । लोडसेडिङको मारबाट आएका हामीलाई जतिबेलै उज्यालो देख्दा बत्ति कति जोगिने है भने जस्तो लाग्ने के ! सुरुमा सुत्नलाई केहि समस्या भएपनि बाक्ला पर्दाले कोठा अध्यारो बनाउँन सकिन्छ तर मान्छेको जात बिस्तारै बानी परिहाल्छ । तर निदाएर जति बेला ब्युँझिए पनि लौ कत्रो बेर सुतिएछ, दिउँसै भइसकेछ नि भने जस्तो लाग्ने । म धेरै पल्ट काममा जान ढिलो भइसकेछ भनेर आत्तिएर जुरुक्कै उठेको छु ।
लामो अँध्यारो पट्टेर लाग्दो
हिउँदको समय म बसेकै ठाउँमा चिसो -२० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ । बस, घर, कलेज जतासुकै राखिएका हिटिङ सिस्टमले जाडोको त्यति धेरै अनुभव त हुदैन तर लामो अँध्यारोले भने डिप्रेसन नै गराउला जस्तो हुन्छ । हुन त विभिन्न अनुसन्धानले देखाए अनुसार नर्बेमा हिउँदमा डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गर्नेको सूचि पनि लामै हुन्छ । बिहान ९ बजे बल्ल बल्ल झुल्किएको घाम ३ बजे नै अस्ताए पछि कति दिक्क लाग्दो हो, आफै सोच्नुस् । निकै लामो समय घाम नै देख्न पाइन्न । यसैले ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा एशियनहरुलाई भिटामिन डि को अभाव हुन्छ शरिरमा । प्राय सबैले त्यो बेला भिटामिन डि को क्याप्सुल खाने हो, दिनमा दुई पल्ट त्यो पनि ।
अँध्यारोले मानिसहरुलाई घरमै बन्द गरिदिन्छ । अँध्यारो र चिसोमा के बाहिर निस्किनु ? अनि, युट्युबमा लामा धार्मिक सिरियलहरुले पालो पाउँछन् । हिउँदमा महाभारत, कृष्णचरित्र, चन्द्रकान्ता, अलिफ लैला, चाणक्य जस्ता हिन्दी सिरियल नहेर्ने नेपालीहरु कमै हुन्छन् सायद ।
कुरा लगभग यस्तै हुन् । तपाईलाई केहि जिज्ञासा भए कमेन्टमा लेख्नुहोला । अनि,नर्बेमा दिन र रातको ठ्याक्कै समय हेर्न भने worldclock को यो लिंकमा जानुस् है ।
from - paniphoto
सोमवार, २०७० आश्विन १३ गते ०७:१४ / Monday, Sep 30, 2013 7:14 am